UMboneleli oBalaseleyo weCable eTshayina | Noyafa
I-NOYAFA ye-Electronic ekhethekileyo kwizixhobo zokuvavanya kunye nabavavanyi bekhebula iminyaka eyi-15
Umvavanyi woBubude beCable
ICable Continuity Tester
Rj11 Rj45 iCable Tester
I-Bnc Cable Tester
Indawo yocingo engaphantsi komhlaba
Umtshina wocingo ongaphantsi komhlaba
Isixhobo seFayibha Optic
Imitha ye-Optical Power
I-Optical Fiber Multimeter
Umvavanyi wekhamera ye-Ipc
Umtshina wokuvala umbhobho
Iskena seWall Stud
Umlinganiselo weNdawo yomgama
Imitha yoMhlaba yeGPS
Imitha yoMgama weLaser
Ingcali yakho yocingo iyayiqonda into oyifunayo
I-Shenzhen Noyafa Electronic Co., Ltd ikhethekileyo kwizixhobo zokuvavanya kunye nabavavanyi bentambo iminyaka eyi-15.
ngamava atyebileyo e-ODM / OEM kwiimveliso ezininzi ezidumileyo ezivela kwihlabathi liphela!
Iimveliso zethu eziphambili: Umhloli wocingo, umvavanyi wentambo ye-LCD, umvavanyi wobude beCable, umvavanyi weCCTV, umvavanyi wocingo ongaphantsi komhlaba, umfumani woluhlu lweLaser kunye nezinye izixhobo zovavanyo.
Eyona NOYAFA multifunction LCD cable ubude umvavanyi FactoryPrice-NOYAFA
Iimpawu zeNF-868:1. Uvavanyo oluvulekileyo, olufutshane, olunqamlezayo, uqhagamshelo olubuyela umva kunye nokumiswa kocingo olwaphukileyo.2. Iyakwazi ukulinganisa ubude bentambo yenethiwekhi, intambo ye-coaxial, intambo yomnxeba kunye nentambo ye-USB.3. Ukufumana ngokukhawuleza ucingo okanye intambo ekujoliswe kuyo phakathi kweentlobo zeengcingo.4. I-Anti-intecference xa ulanda intambo kwi-exchanger okanye kwi-Router. 5. Iindlela zokuskena ezimbini: iswitshi yesiqhelo / iswitshi yePoE. 6. Imisebenzi yokugcina kunye nememori yokulinganisa idatha.7. Ukulibaziseka okuzenzekelayo kokucima kunye nomsebenzi wesibane sangemuva.
I-NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M ye-lan cableOverviewNF-8108M ngumvavanyi wentambo yothungelwano, eyenziwe ngumvavanyi (NF-8108), kunye ne-8pcs ekude isazisi.Inokukhangela impazamo yocingo lwe-STP/UTP, ubude bokulinganisa intambo ye-lan ngokuchanekileyo. .Isebenza ngokubanzi kuthungelwano lwekhompyutha kunye nezinye iinkalo.
Noyafa underground operation lula Multi function NF-820 cable locator
Iimpawu eziphambili: ● Khangela indawo yentambo phantsi komhlaba okanye kwenye intambo engabonakaliyo, uluhlu luyi-0-2m. ● Uvakalelo lomqondiso kwisithumeli kunye nomamkeli siyahlengahlengiswa. (0-2m) ● Kulula ukulandela nge-AC Interference Rejection epheleleyo ● intambo yokulandelela ithowuni ephilayo (＜220V) enesokethi ukuphepha ukudinwa. ● Intambo yokulandelela ekwaziyo ukusebenza, enjengeeconductors enye, 2-core okanye multi-core cable. Iinzuzo: ● Iearphone inceda ukusebenza kwindawo enengxolo. ● Intambo yentambo kunye nesokethi zinokusetyenziswa ngaxeshanye. ● Umsebenzi wesalathisi esisezantsi. ● Ibhetri yeLithium etshajwayo kwakhona yesithutha.
NOYAFA NF-8209 LCD Bonisa umlinganiselo Ubude beLan Cable POE Wire Checker Cat5 Cat6 Lan Test Network Isixhobo Skena iCable Wiremap Tester
Inkcazo yeMveliso:i-NF-8209 sisizukulwana esitsha sokubonelela ngedijithali kunye ne-analog yokubonisa zonke kwi-toner enye yenethiwekhi kunye ne-probe. Ineendlela ezintathu zokhetho lokulandelela intambo njengemowudi yedijithali, imo ye-analog kunye nemo ye-PoE. Oko kuthetha ukuba ixhotyiswe ngobona buchwepheshe bunamandla bendawo yekhebula kuyo nayiphi na indawo yokusebenza. Kwakhona, kubandakanya ukulinganisa ubude bekhebula, uvavanyo lweempazamo zentambo, uvavanyo lwe-PoE, ukuqhwanyaza kwehabhu kunye nomsebenzi we-NCV, zonke ezi zinto ziyenza ibe sisixhobo ekufuneka sisetyenziselwe iinjineli zeekhebula. Ukusebenza kweMveliso1. CONT-- Uvavanyo oluvulekileyo, olufutshane, olunqamlezayo, ect ye-STP, intambo ye-UTP.2. Ubude--umlinganiselo wobude bentambo ye-lan, uluhlu yi-2.5m ~ 200m.3. Skena--Analog/Digital/ imo ye-PoE yokufumana iintambo ze-lan.4. I-PoE-- ekhoyo kwi-switch ye-PoE esemgangathweni okanye engekho (5 ~ 60V), chonga umgangatho we-AT okanye we-AF wohlobo lwe-PSE. 5. Flash--locate network port by the flashing port light on switch/ router.Package Include: Transmitter 1pc ( battery is not include ) Receiver 1pc Remote 1pc Earphone 1pcCable adaptors 1 setCarry bag 1pcUser manual 1pc Quality certificate 1pc
Ukuba awukwazi ukufumana naziphi na iimveliso ezingaphandle kweshelufu ezifanelekileyo kwiprojekthi yakho, zama uncedo lwenkonzo yokwenza ngokwezifiso i-NOYAFA.
UNoyafa unengcali yeR&D isebe elibandakanya isoftware& iinjineli zehardware, iinjineli zokungunda. ngoko, ODM& Iinkonzo ze-OEM zamkelekile kuthi. Ngokubanzi, abathengi bangathanda ukwenza eyeyabo iLogo kwiscreen sento okanye ileyibhile, ibhokisi yombala, incwadi yomsebenzisi, okanye ikhathoni.
Kwabanye abathengi, kusafuneka bacwangcise iilwimi ezahlukeneyo kwizixhobo ezifana neJamani, isiPolish, isiRashiya, isiTurkey, isiKorea, njl.njl. iinjineli zethu zesoftware zinokuphinda zicwangcise kwaye zinike abathengi ngeelwimi ezininzi Njengomenzi wovavanyo lwentambo, i-noyafa cable tester, iphumelele ukuthembela kwabathengi ngeemveliso ezilungileyo.
Yamkela iiodolo ze-OEM kunye ne-ODM nge-R yobuchwephesha& D iqela kunye neqela lenkonzo emva-kwentengiso.
Iindleko zokulawula, zingagqithi kuhlahlo lwabiwo-mali, zenza iimveliso zikhuphisane ngakumbi kwimarike.
Yonke imveliso esiyivelisayo iphumelele ukuhlolwa komgangatho, ukuhlangabezana neemfuno.
Indawo yemizi mveliso eyeyakho
Indawo yethu yeshishini "indlela kaNowa" ineemitha ezizikweri ezingaphezu kwama-20000.
Sibonelele ngenkonzo yokuvelisa i-OEM/ODM iminyaka engama-25. Nokuba zithini na iimfuno zakho, ulwazi lwethu olubanzi kunye namava akuqinisekisa ngesiphumo esanelisayo. Sibeka umzamo wethu omkhulu wokunikezela ngekhwalithi elungileyo, inkonzo eyanelisayo, ixabiso elikhuphisanayo, ukuhanjiswa kwangexesha kubathengi bethu abaxabisekileyo.
I-SHENZHEN NOYAFA TECHNOLOGY CO., LIMITED ngumvelisi wezixhobo zokuvavanya kwintsimi ye-cabling e-Shenzhen, e-China.
Sizodwa kuphando kunye nophuhliso, ukuveliswa kunye nokuthengiswa kovavanyo lwenethiwekhi yonxibelelwano, i-wiring edibeneyo kunye neemveliso zezixhobo.Imveliso eziphambili yi-Wire tracker, i-LCD tester cable, i-Cable length tester, i-CCTV monitor tester, i-POE checker, i-Underground wire locator, uluhlu lweLaser. umfumani kunye nezinye izixhobo zovavanyo.
Emva kweminyaka eyi-15 yophuhliso, senze ubutyebi bamava kwiintengiso kunye neqela lenkonzo emva kokuthengisa. Abavelisi kunye nabasebenzisi ekwenziweni kodumo oluphezulu kakhulu. Okwangoku, iimveliso zethu zithunyelwa kwihlabathi liphela, ngakumbi eYurophu, eAsia. Naphi na okanye nanini na, ukwanelisa abathengi lusukelo lwethu lwanaphakade kunye nenjongo yethu.
Okwangoku, iimveliso zethu zithunyelwa kwihlabathi liphela, ngakumbi eYurophu, e-Asia.Nokuba kuphi na okanye nini, ukwanelisa abathengi kukufuna kwethu ngonaphakade kunye nenjongo.
Ifoto yeqela labathengi
UNoyafa wenze intsebenziswano ende nelungileyo kunye neProkit's Industries Co., LTD ukusukela ngo-2012. Iintengiso zonyaka zizigidi ezingama-500 ze-USD, ikakhulu zibonelelwa ngomvavanyi wentambo, indawo yokukhangela intambo kunye nocingo olungaphantsi komhlaba.IAmazon lelinye lamaqabane abalulekileyo eNoyafa. Sinabaninzi abasasazi beAmazon. Uluhlu lweemveliso lubandakanya indawo yocingo ephantsi komhlaba, umvavanyi wentambo, umkhangeli wentambo ye-PoE, umtshina wocingo, i-laser rangefinder. Umthengisi ophezulu yi-NF-8209, NF-8601S kunye ne-NF-488, intengiso yonyaka inokufikelela kwi-6 yezigidi ze-USD ngonyaka.Ii-Mobile Tele Systems (MTS) Siseke intsebenziswano ende kunye ne-Mobile Tele Systems eRashiya ukususela ngo-2013. Sibonelele kakhulu TDR lan cable tester, network wirecator locator, underground wire detector etc. RBS Telecom(RBS)Abathengi bethu bagubungela zonke iindawo zehlabathi, Senze intsebenziswano ende nelungileyo neRBS Telecom yakwaSirayeli iminyaka emi-5, ikakhulu sibonelela ngomvavanyi wentambo, indawo yokukhangela intambo. kunye nomkhondo wocingo ongaphantsi komhlaba.
Ukuvulwa kwevidiyo yovavanyo yeNoyafa multi function cable tester NF-8601W Uvavanyo lweVidiyo kumthengi wethu
Njengomnye wabathengisi abaphezulu phakathi koluhlu lwemveliso yonke. I-NF-8601W iphumelela abalandeli abaninzi abavela kwihlabathi liphela ngenxa yokusetyenziswa kwayo, ixabiso elingabizi kakhulu kunye nomgangatho othembekileyo. Inokuvavanya ukuqhubeka kwekhebula, ubude bekhebula, indawo yekhebula, kunye nokuvavanya i-PoE kunye ne-PING. Ngee-remote ezisi-8 zinokuvavanya iintambo ezisi-8 kanye ngexesha emva koko zikuncede uphucule ukusebenza kakuhle.
UKUBA UNEMIPHI IMIBUZO, SIBHALE
Copyright © 2022 SHENZHEN NOYAFA ELECTRONIC CO.,LIMITED - www.noyafa.net Onke Amalungelo Agciniwe.